FAQ | Narinepal | Page 2
स्याउ किन तल झर्छ भन्ने न्युटनलाई झक्झकाउने प्रश्न जस्तै सामान्य जनजीवनमा यो प्रश्न कमै मानिसको मनमा आउँछ होला। तर विज्ञानको भाषामा यो प्रश्नको उत्तरमा नै संसार र सारा प्राणी जगतको अस्तित्व अडेको छ। आज यही प्रश्न… र यससँग सम्बन्धित केही स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछु।
के मिन्स पछि सर्नु सामान्य हो ?
महिनावारी महिलाहरूमा हुने एक सामान्य प्रक्रिया हो। निषेचित डिम्बको डिम्बरोपण (पाठेघरको भित्तामा टाँसिने प्रक्रिया)का लागि बाक्लो भै तयार भएको पाठेघरको भित्री तह गर्भधारण नभएको स्थितीमा तुहिएपछि योनिमार्गबाट रगत आउनुलाई हामी सामान्यतः महिनावारी, नछुने हुनु, पर सर्नु वा रजस्वला हुनु भनेर चिन्दछौं, तर यसको सञ्चालन विशेष गरेर अन्तःश्रावी प्रणाली (हार्मोनहरूको एक जटिल प्रणाली) बाट हुन्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा नलागेकाहरूलाई यो कुरा बुझ्न अलि गाह्रो पर्ने भए पनि पहिले यसैलाई बुझ्ने प्रयास गरौं। मस्तिष्कको hypothalamus भन्ने भाग, पिटयुटरी ग्रन्थि र डिम्बाशयवाट निस्कने हार्मोनहरूले यसलाई सञ्चालन गर्छ। Hypothalamus बाट निस्कने gonadotropin releasing hormone (GRH) को प्रभावमा पिटयुटरी ग्रन्थीले follicular stimulating hormone(FSH) तथा luteinizing hormone (LH) निकाल्छ। यी हार्मोनहरूको प्रभावमा प्रजनन अंगहरूले काम गर्छन्। महिनावारीको चक्रलाई हेर्ने हो भने मुख्यतयाः तीन चरणमा बाँड्न सकिन्छ।
प्रश्न : म २४ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ । केही महिनाअघि प्रेमीसंग सुरक्षित यौन सम्पर्क भएको थियो । हाल उहाँ केही समयका लागि नेपालबाहिर जानुभएको छ । विगत केही महिनादेखि ममा यौन इच्छा एकदमै बढी हुने गर्छ र हस्तमैथुन पनि गर्ने गर्छु । हस्तमैथुन गर्दा आफ्नो बीचको औंला डेढ इन्च जति पसाएर घर्षण गर्ने गर्छु । प्रत्येक दुई तीन दिनको फरकमा यस्तो गर्ने गर्छु हस्तमैथुन गर्दा आनन्द त मिल्छ तर यसले हाम्रो (म र मेरो प्रेमी) भविष्यमा केही असर गर्छ कि ? के हस्तमैथुन गर्दापछि सन्तान प्राप्तिमा असर पर्छ ? सायद तीन महिनाभित्र मेरो विवाह मेरो प्रेमीसँगै हुँदै छ, के अहिले मैले यसरी हस्तमैथुन गर्दा योनी प्वाल ठूलो हुन्छ ?
डा. सुमनराज ताम्राकार- बिहेको पहिलो रातमा तन्नामा रगतका टाटा देखिएन भने श्रीमती कुमारी रहिनछ भनी तनाव लिने पुरुष नेपाली समाजमा थुप्रै छन्। तर, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले कुमारीत्वको यस्तो मापनलाई हास्यास्पद र कपोलकल्पित मान्छ। पहिलो पटकको यौन सम्पर्कमा महिलाको हाइमेन च्यातिएपछि बग्ने रगतलाई कुमारीत्वको प्रमाणको रूपमा लिनु मूर्खता हो। केही महिला हाइमेनबिना जन्मिने, सबै जनामा हाइमेन कमलो नहुने, खेलकुद, घोडचढी, साइक्लिङलगायत शारीरिक अभ्यासका क्रममा च्यातिनसक्ने कसैकसैको महिनावारी सुरु भएपछि यसमा भएको प्वाल (छिद्र) ठूलो हुँदै जान सक्ने तथ्य चिकित्सा विज्ञानले पत्ता लगाएको छ। साथै, कतिपयको हाइमेन निकै लचकदार भई कहिल्यै नच्यातिने वा च्यातिए पनि रगत नबग्ने हुन्छ भने कतिपय हाइमेन रहँदै पनि गर्भवती हुन सक्छन्।
मासिक श्राव अर्थात् महिनावारी हुँदा किन पेट दुख्छ ?
म १८ वर्षकी विवाहित महिला हुँ। विवाह हुनुअघि मेरो मासिक श्राव नियमित हुन्थ्यो। त्यतिबेला धेरैभन्दा धेरै पेट दुख्थ्यो। अहिले आएर मेरो महिनावारी नियमित हुन छाडयो, साथै पेट पनि साह्रै दुख्छ जसले गर्दा ५ दिन जति हिँड्न पनि सक्दिनँ।
लिङ्ग कत्रो हुनुपर्ला ?
सन्तान उत्पादन गर्ने र यौन सुख दिने अङ्ग भएर लिङ्गको विशेष सांकेतिक महत्त्व छ। यसको लम्बाइ वा मोटाइसँग व्यक्तिको आत्मसम्मान जोडिएको हुन्छ। यो आफ्नो शारीरिक स्वरूपमा भएको असन्तुलनको उपज पनि हो। लिङ्गको लम्बाइ तथा मोटाइ व्यक्तिअनुसार एकदमै फरक हुन सक्छ। किन्सेले गरेका अध्ययनअनुसार सालाखाला लम्बाइ उत्तेजित नहुँदा ३ दशमलव ८९ इन्च र उत्तेजित हुँदा ६ दशमलव २१ इन्च हुन्छ। त्यसैगरी सालाखाला मोटाइ उत्तेजित नहुँदा ३ दशमलव ७५ इन्च र उत्तेजित हुँदा ४ दशमलव ८५ इन्च भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। सालाखालाको कुरा गर्दा ८८ प्रतिशत पुरुषको लिङ्ग उत्तेजित हुँदा ५ देखि ७ इन्च लामो हुने देखिएको छ भने उत्तेजित नहुँदा ३ देखि ५ इन्चको हुने देखिएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उत्तेजित नभएको बेलाको लिंगको नापले उत्तेजित लिंगको लम्बाइलाई प्रतिविम्बित गर्दैन।
सम्झनासाथ किन यौनसम्पर्क राख्न मन लागेको ?
हामीलाई थाहै छ, हाम्रा इन्दि्रयहरूबाट सन्देश प्राप्त गरेर मस्तिष्कले अथ्र्याएपछि त्यसलाई बुझिन्छ। इन्दि्रयबाट प्राप्त गरिने सन्देश यौन उत्तेजक भए यौन उत्तेजना बढ्छ। महिलाको शरीर पुरुषलाई यौन आकर्षक लाग्न सक्छ जसले गर्दा यौनसम्पर्क गर्न मन लाग्ने हुन्छ, तर मस्तिष्कले सोचे मात्र पनि यस्तो प्रभाव देखिन्छ। उहाँलाई सम्झनु एक किसिमले यौन परिकल्पना हो। यस्ता कल्पना व्यक्तिका आफ्ना पुराना अनुभवमा आधारित वा नितान्त कल्पित हुन्छन्। प्रायःजसो स्थितिमा दुवै थरीको मिश्रण हुन्छ। हस्तमैथुन गर्ने प्रक्रियामा यौन परिकल्पनाको प्रयोग हुन्छ। अल्फ्रेड किन्सेका अनुसार लगभग सबै पुरुषले तथा धेरैजसो (६४ प्रतिशत) महिलाले हस्तमैथुन गर्दा यौन परिकल्पना गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।